Koox ka dheesha horyaalka Premier League oo heshiis shan sanadood ah hordhigaysa Ibrahima Konate… (Miyuu daafacan u soo dhaqaaqi doonaa Ingiriiska?) – Gool FM
Koox ka dheesha horyaalka Premier League oo heshiis shan sanadood ah hordhigaysa Ibrahima Konate… (Miyuu daafacan u soo dhaqaaqi doonaa Ingiriiska?)
Haaruun April 17, 2021
(England) 17 Abriil 2021. Koox ka dheesha horyaalka Premier League Ingiriiska ayaa heshiis shan sanadood ah hordhigtay daafaca Ibrahima Konate.
Kooxda Liverpool ayaa la soo warinayaa inay isku diyaarinayso inay dalab shan sanadood ah hordhigto Ibrahima Konate si ay daafacan dhexe ugu soo kaxaysato garoonka Anfield inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xiddigaha ee xagaagan.
Mustaqbalka 21-sano jirkaan ayaa weli ah mid si weyn loo hadal hayo, iyadoo kooxo dhowr ah oo ay jiraan Liverpool, Manchester United iyo Arsenal la sheegay inay xiisanayaan adeeggiisa.
Warbixin dhowaan soo baxday ayaa sheegaysa in heshiiska laacibka reer France ee RB Leipzig lagu burburin karo 32.5 milyan oo euro oo dhiganta ee 28.2 milyan oo gini iyo 34 milyan oo euro oo u dhiganta 29.5 milyan oo gini, halkii lagu jabn lahaa adduun dhan 40 milyan oo euro oo u dhiganta 34.7 milyan oo gini.
Sida uu warinayo Suxufiga reer Talyaani ee Fabrizio Romano, kooxda haysata horyaalka Premier League ayaa weli ka shaqeynaysa sidii ay heshiis ula gaari lahayd daafacan dhexe.
Romano ayaa sheegay in kooxda Tababare Jurgen Klopp ay isku diyaarinayso inay miiska saarto heshiis shan sano ah, iyadoo rajaynaysa inay ku guuleysato loollanka loogu jiro saxiixa xiddigan suuqa soo socda.
Konate ayaa dhaliyay hal gool 18 kulan oo uu u saftay Kooxda RB Leipzig intii lagu jiray xilli ciyaareedkan 2020-21.
Tammy Abraham oo laga saaray shaxda Kooxda Chelsea ee caawa afar dhammaadka FA Cup-ka la ciyaaraya Manchester City
Macallin Ole Gunnar Solskjaer oo xaqiijiyey in Man United ay sii wadi doonto wahadallada ay kula jirto mid ka mid ah xiddigaheeda